Nokia 8810 nwere ike inwe WhatsApp | Gam akporosis
Nokia 8810 ga - enwe ike iji WhatsApp
Edere Ferreno | | Ngwa gam akporo, Mobiles, Whatsapp
Nokia 8810 bụ nke abụọ a ma ama n’ekwentị Nokia ka ewepụtara n’ahịa ọhụụ. Izu a ka emechara ya na nzuzo na Spain. Dị ka ọtụtụ n'ime gị nwere ike ịmaworị, ekwentị anaghị eji gam akporo, mana nwere KaiOS, sistemụ arụmọrụ pụrụ iche. Nke a na - eme ka ịgaghị enwe ike iji ngwa.
Mana ọ dị ka ọ ga - abụ ihe ọzọ, ebe ọ bụ na ndị ọrụ nwere Nokia 8810 ga-enwe ike ịwụnye WhatsApp na ekwentị ha. N'ihi ya, ha ga-enwe ike ịnụ ụtọ ngwa ngwa ozi kachasị ewu ewu na ahịa na ya.
Nke a bu ozi oma nke HMD Global n'onwe ya kwadoro, ulo oru nke Nokia. Yabụ anyị amatala n'ezie Nokia 8810 ga - enwe ike iji ngwa izi ozi ama ama. Ihe dị mkpa, n'ihi na ngwa dị maka iOS na gam akporo naanị.
Mana ha kwesiri iru nkwekọrịta ya na WhatsApp ka ọ were nọrọ na ekwentị a na KaiOS. Ihe ekpughebeghị n'oge a bụ ụbọchị nke a ga-ebupụta ngwa maka ngwaọrụ Nokia a. Ya mere, anyị ga-echere maka ozi ndị ọzọ na nke a.
N'afọ gara aga, Nokia meriri ọtụtụ ndị ọrụ site na mwepụta nke ọhụụ nke 3310. N'afọ a, firmlọ ọrụ na-achọ ịmeghachi ihe ịga nke ọma na ụdị nke Nokia 8810. Ekwentị tụgharịa, nke ọtụtụ ndị maara site na Matrix nkiri, nke nyere aka na ụdị nke ihe nlereanya ahụ.
N'afọ a, a na-ebido ihe ngosi a na agba odo odo, nke doro anya na-adọta ọtụtụ ndị ọrụ site na ndị ọrụ. Mbido ya na-aga n'ihu, mana kemgbe izu a Nokia 8810 a dị ugbu a na Spain. N'oge na-adịghị anya, ị ga-enwe ike iji WhatsApp na ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Nokia 8810 ga - enwe ike iji WhatsApp